Mogadishu Journal » 2019 » January » 3
Aqalka sare oo golaha Shacabka Soomaaliya xiriirka u jaray
Mjournal :-War saxafadeed ay dhawaan soo saareyn guddiga joogtada ah ee aqalka Sare ee Soomaliya ayaa lagu sheegay in aqalka sare ay xariirka u jareyn golaha shacabka Soomaaliya. Halkaan hoose ka akhriso war saxafadeedka ay soo saareyn aqalka sare oo uu ku saxiixanyahay...
Dagaal dib uga bilaawday deegaanka Tukaraq
Mjournal :-Wararka soo baxaya ayaa sheegaya inDeegaanka Tukaraq ee gobolka Sool oo ay isku hor fadhiyeen ciidamada Puntland iyo Somaliland dagaal halkaasi dib uga qarxay. Wararka ayaa intaas ku daraya in dhinacyada Tukaraq isku hor fadhiya ay is weedaarsadeyn Madaafiic, iyadoo...
Mjournal :-Dacwad-oogayaasha Sacuudiga ayaa dil toogasho u dalban doono shan nin oo ku eedeysan dilka weriye Jamaal Khaashuqji, waxaa sidaas maanta werisay wakaaladda wararka dalkaas, ayada oo maanta ay maxkamad billowday dhageysiga dacwadaha 11 eedeysane. Wakaaladda wararka SPA...
The United Nations is looking into the expulsion of UN Special Representative for Somalia Nicholas Haysom from Mogadishu, UN Deputy Spokesman Farhan Haq said in a press briefing on Wednesday. “We are looking into the matter, we are trying to get the various details corroborated,...
Mjournal :-Waxaa maanta lagu waddaa in la dhaarinaayo Ilhan Cumar oo ah Gabadh Soomaaliyeed oo dhawaan ka mid noqotay Aqalka Koongaraaska ee dalka Mareykanka. Guud ahaan Dalka Maraykanka maanta waxaa lagu wadaa in la dhaariyo xubnaha cusub ee ku soo biiray labada aqal ee...
Mjournal :-Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey ayaa maanta oo Khamiis ah shir isugu imaanaya, iyadoo kaga hadlaya xaalado kala duwan, qeyb ka mid ah shirka ayaa looga hadli doonaa xaalada Soomaaliya. hirkan oo furmi doona marka ay saacada geeska Afrika tahay 4-ta Galabnimo,...
QM oo ka hadashay Ceyrinta Danjire Heysom
Mjournal :-Ku xigeenka afhayeenka UN-ka Farhan Haq ayaa sheegay in Qaramada Midoobay ay ka fiirsanayso cayrinta Wakiilka Gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Haysom. Waxaa uu sheegay in ay baaritaano ay ku bilaabeen sababaha keenay in Wakiilka dalka laga...